Onyeisiala Sri Lankan eduola ndo Minista anọ n’iyi ọrụ – Igbo Services
Isiokwu dị mkpaMba ụwa
By CHIDI IGWE	 Last updated May 17, 2022
Onyeisiala mba Sri Lankan bụ,Gotabaya Rajapaksa nọrọ na Satọọde duo mmadu anọ n’iyi ọrụ dika ndi Minista dika onye ndu otu ndọrọndọrọ United National Party bụ,Ranil Wickremesinghe ka eduru n’iyi ọrụ dika onye prime minista.
Dika ọnụ n’ekwuru onyeisiala siri kwuo,ndi ọhụrụ a bụ,Dinesh Gunawardena bụ minista nke public administration, G.L. Peiris minista nke foreign affairs, Prasanna Ranatunga minister nke urban development, na Kanchana Wijesekera minist nke power and energy.
Nwanne onyeisiala bụ,Mahinda Rajapaksa gbara arụkwaghi n’ụbọchi Mọnde,dika ndi nkwado ya kusuru ndi n’eme ngaghari iwu n’ụzọ udo.
Emere ka amatya na, “aga akpọlitekwa ndi ozo n’oru minister,dika onyeisiala nakwa onye prime minista kwara ndi ndọrọndọrọ ka jikọta aka ọnụ me ka gọọmenti a gbocha mkpa nile nakwa nsogbu akụlụba mba ha nwere.”
CHIDI IGWE 168 posts 0 comments
Onyeisiala Buhari eduola onye isi oche onye ọka ikpe ọhụrụ n’iyi..
Kpakpando BBNaija pụtara onye mmeri ugboro abụọ wuo n’ elu.
Ọtụtụ puku mmadụ na-eme ngosi na Madrid n’ihu nzukọ NATO.
Putin ga-eme njem mba ofesi mbụ kemgbe mwakpo Ukraine.
Isiokwu dị mkpa251